भीम रावल देख्यो कि किन जान्छ मधेशी नेताको सातो ? - Sagarmatha Online News Portal
भीम रावल देख्यो कि किन जान्छ मधेशी नेताको सातो ?
काठमाडौ, १८ भदौ। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल देख्यो कि योमधेसी नेता झस्कन्छन् । बैठक, छलफलमा रावलको प्रस्तुति अगाडी उनीहरु लिलिपुट झैं लाग्छन् । तर, मधेसमा रावलको नाम सकारात्मक हैन, नकारात्मक पात्रका रुपमा चर्चा छ ।
मधेसी नेताले भीम रावललाई मधेसविरोधी नेताका रुपमा चिन्ने गर्छन् । संयुक्त बैठकहरुमा रावलले केही बोले भने उनका कुरा काट्न मधेसी नेतामा होडबाजी नै चल्छ । पछिल्लो समय गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र भीम रावलवीच दोहोरी नै चलेको छ ।
आखिर भीम रावलसँग किन झस्किन्छन् मधेसी नेताहरु ? उनीहरु झस्किनुका मुख्य कारण नै उनको बौद्धिक क्षमता र तार्किक बहस नै हो । रावल विसं २०१२ साल मंसिर ३० गते अछामको साँफेबगर ९ स्थित कालाआम भन्ने ठाउँमा जन्मिएका एमालेका सुदुर पश्चिमका भेट्रान नेता हुन् । हाल उनी काठमाडौंको टोखास्थित बिनाज रेसिडेन्सीमा बस्छन् ।
रावलले राजनीतिशास्त्रमा एमए र कानूनमा बीएल गरेका छन् । उनी पीएचडी स्करल हुन् । राजनीतिमा सक्रिय हुनुअघिसम्म उनी वकालती पेशासमेत गर्थे । एमालेका वौद्धिक एवं तार्किक नेता मानिने रावलले भूमिगत वाम राजनीतिमा १२ वर्ष विताएका छन् भने विभिन्न मितिमा गरेर करिब एक वर्ष बन्दी जीवन बिताएका छन् ।
रावलले नेपालमा साम्यवादी आन्दोलन उदभव र विकास’ नामक पुस्तक लेखेका छन् । त्यसैगरी राजनीति र मानवअधिकार’ उनको दोस्रो किताव हो । रावल कवि पनि हुन् । उनको ‘लिम्पियाधुरा’ कविता संग्रह प्रकाशित छ ।
कानून तथा अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा समेत काम गरेका रावल नेकपा एमालेभित्र कोर टीममा नेता मानिन्छन् । माओवादीसँगको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियामा रावलको सक्रिय भूमिका छ ।
पछिल्लोपटक बिमलेन्द्र निधीसँगको घम्साघम्सी र भीम रावल आएपछिमात्र बोल्छु भन्ने रामनरेश रायको अडानपछि रावल अझ चर्चामा छन् ।
अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहदरबारमा बोलाएको बैठकमा मधेसवादी नेता रामनरेश यादवले भीम रावलको नामै लिएर उहाँलाई केही सुनाउन चाहेको बताएका थिए । सुदूरपश्चिममा शेरवहादुर देउवापछिको राष्ट्रिय नेताका रुपमा स्थापित हुँदै गरेका रावललाई मधेसवादी नेताहरु ओलीको अर्को रुप ठान्छन्
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीले बोलाएको शीर्ष बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेता राम नरेश यादवले भीम रावल आएपछि मात्र बोल्ने अडान लिएका थिए । रावल त्यस बेला शौचालयमा थिए । रावल शौचालयबाट फर्किएपछि उनले एमालेले सत्य बोल्छ कि बोल्दैन भनेर पोलिग्राफ मेसिन राख्नुपर्ने बताएका थिए ।
शीर्ष बैठकहरुमा रावल र मधेसी नेताहरुको घोचपेच र वादविवाद प्रायः भइरहन्छ ।
हुन त रावल एमालेभित्रको गुट राजनीतिमा माधव नेपाल पक्षका उपाध्यक्ष हुन् । तर, विपक्षीहरुसँगको व्यवहार र विशेष गरी मधेसी मोर्चासँग डिल गर्ने सन्दर्भमा उनी ओलीका अनुयायी हुन् । कतिपय अवस्थामा रावल ओलीभन्दा धेरै अघि बढेर मधेसवादी दलहरुसँग बहस गर्छन् ।
रावलमाथि मधेस विरोधीको आरोप
संविधान निर्माणका बेला मेधसी मोर्चाले उठाएका मागहरुको रावलले कडा प्रतिवाद गरेका थिए । खासगरी कैलाली कञ्चनपुरलाई मधेसतिर गाभ्ने कुराको विरोध होस् या मधेसमा दुईवटा प्रदेश बनाउने विषय होस्, यसमा रावलले कडा प्रतिवाद गरेका थिए । तर, रावल भन्छन्, म मधेस र मधेसी जनताको पक्षमा उभिन्छु । तपाई नभई मधेसी नेताहरु बैठकमै बोल्न छाडे नि भन्ने प्रश्नमा रावलको जवाफ छ, यसबाट म देशको पक्षमा दह्रै गरी उभिएको रहेछु भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’